Kan sameeyey, PowerPoint Kediska - Samee Kediska ah ee PowerPoint ama QuizCreator u
> Resource > Talooyin > Samee Kediska ah ee PowerPoint, Kan sameeyey, PowerPoint Kediska ama QuizCreator
Samee Kediska ah ee PowerPoint, Kan sameeyey, PowerPoint Kediska ama QuizCreator
Samaynta dadka kale kedis oo caqabad ku noqon karaa oo xiiso leh. Waxaa jira siyaabo badan oo aad u adeegsan kartaa in la abuuro kedis ah. PowerPoint noqon kartaa qalab waxtar u leh oo aad u qaar ka mid ah su-dhexgal. Sidoo kale, waxaa laga yaabaa in aad la abuuro Flash kedis la Flash software kedis . Halkan waxaan ku arki doonaa sida si ay u abuuraan kedis PowerPoint siyaabo kala duwan ah.
Qeybta 1: Samee Kediska ah la PowerPoint
Qeybta 2: Ka dhig Kediska ah la Kan sameeyey PowePoint Kediska
Qeybta 3: Ka dhig Kediska ah la QuizCreator
Samee Kediska ah la PowerPoint
Dad badan ayaa waxa ay ku dooneysaa sida loo sameeyo aalaha in PowerPoint. Halkan waxaan ku siin laba siyaabood samaynta kedis ah PowerPoint.
1 Baro barnaamijyada VBA iyo abuuro kedis ah in PowerPoint .
2 Calan u links gudaha on badhamada u dhexaysa bogagga si toos ah dhagaystayaasha in ay ku keento bogga ama jawaab-celin bogga ku salaysan jawaabahooda. Sidaas, aad bandhigga eegi doonaa sida kedis ah, oo waa wax fudud oo dareen leh. Laakiin haddii aad qabto su'aalo badan si ay u sameeyaan galay kedis ah, ma noqon doono shaqo fudud.
Halkan waa muunad kedis PowerPoint (kala doorashada badan)
Fiiri faahfaahinta sida loo sameeyo sida aalaha fudud ee PowerPoint >>
Samee Kediska ah la Kan sameeyey, PowerPoint Kediska
Iyadoo software-saddexaad sida Atrixware ee PowerPoint Quizmaker, aad sifudud karaa kedis ah oo ay u eg loo abuuray in PowerPoint. Waxaa kuu baajinaysaa waqti ay ku abaabuulaan xidhiidhka ka dhexeeya raaceyso. Si aad u isticmaasho this PowerPoint Quizmaker, waa in aad furto PowerPoint si barnaamijka shaqayn karin.
Samee Kediska ah la QuizCreator
Hababka kuwa kor ku soo saari karaan oo kaliya kedis doorashada badan. Qaar ka mid ah nooca kedis adag sida ku habboon, isku xigxiga, kaalinta kulul, iwm, ma ay caawin. Nasiib wanaag, Wondershare QuizCreator waa la heli karaa. Software waxaa loogu tala galay abuurista aalaha ku kalifay. Ilaa The ilaa 9 noocyada su'aal oo caan ka dhergin doonaa baahida ugu users '. Waxaa si weyn loo yareeyo waqtiga abuurka kedis ah, iyo fursadaha daabacaadda dabacsan sida Flash, Exe, hadalka / Excel si fudud si ay ula wadaagaan wax online ah ama offline. Sidaas oo kaliya aad u baahan tahay in Cudarada kedis ah si aad u soo bandhigidda PowerPoint in ay sameeyaan kedis ah.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo sameeyo Kediska ah la QuizCreator
Top 5 Free Office Software
Sida loo sameeyo Kediska Math ah
Qalin-Cod iyo Muqaal Fikradaha - Sidee-to, Share oo dheeraad ah
Samee Dhalashada Martiqaad Cards for Baby ee First Dhalashada
Wedding Song List - Songs Wedding u Xaflada, Qoob ka soo dhaweynta iyo
Sida loo sameeyo Gaarka ah tababarasho Casho Dhigashada
Sida loo sameeyo Muqaal HTML5 ah
Sida loo abuuro Muqaal Gallery ah ee iWeb
Sida loo sameeyo Flash bandhigid Muqaal Tutorial
Ku dar sawrirrada Farshaxan in Retouch Scrapbookings Your